Akụkọ - ụlọ ahịa ahịa DTS na-aga ije na-eme ihe nkiri
TSlọ ọrụ ahịa DTS na-aga ije na-eme mmemme
Na Sọnde, Julaị 3, 2016, ọnọdụ okpomọkụ dị 33 Celsius, ndị ọrụ niile nke DTS Marketing Center na ụfọdụ ndị ọrụ nke ngalaba ndị ọzọ (gụnyere Onye isi oche Jiang Wei na ndị isi ahịa dị iche iche) mere isiokwu nke "ije ije, ịrị ugwu, iri nri. ihe isi ike, ọsụsọ, edemede, na ịrụ ezigbo ọrụ ”. Trekking ke ukot.
Ebe mmalite nke ọzụzụ a bụ isi ụlọ ọrụ, square n'ihu ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ nke DTS Food Industrial Equipment Co., Ltd.; isi njedebe ya bụ Zhushan Park nke Zhucheng City, na njem n’ugwu ahụ gbakọtara karịa kilomita iri abụọ. N'otu oge ahụ, iji nwekwuo nsogbu nke ọrụ njem a ma nye ndị ọrụ ohere ịbịaru nso na okike, ụlọ ọrụ ahụ họọrọ ụzọ ụkwụ jupụtara na ime obodo.
N'oge ihe omume a na-eme mkpagharị, enweghị ụgbọ nnapụta, na ịpụ, ọtụtụ ndị ọrụ chere na ha enweghị ike ịkwụsị, ọkachasị ụfọdụ ndị ọrụ, ha echeela echiche ịkwụsị ọkara. Agbanyeghị, site n'enyemaka nke otu na nkwalite nke nsọpụrụ mkpokọta, ndị ọrụ 61 (gụnyere ụmụ nwanyị ndị ọrụ 15) ndị sonyere na ọzụzụ ahụ ruru ụkwụ nke Zhushan Mountain, mana nke a abụghị njedebe nke ọzụzụ anyị, ebumnuche anyị bụ n'elu nke ugwu Iji bia n’ugwu ahu n’otu mgbe, anyị gara ezumike n’okpuru ugwu ahụ wee hapụ akara ukwu anyị ebe a.
Ka obere ezumike gachara, ndị otu ahụ bidoro njem ugwu; ụzọ ọrịrị dị egwu ma sie ike, ụkwụ anyị gbara ụka na akwa uwe, mana anyị nwetara ọhụụ na-adịghị ahụ n'ọfịs, ahịhịa ndụ, ugwu nta na ifuru na-esi isi.
Mgbe awa anọ na ọkara gachara, anyị mechara rute elu ugwu ahụ;
N’elu ugwu ahụ, ndị niile so na ya bụ ọzụzụ etinye aha ha n’akwụkwọ ụlọ ọrụ ahụ, nke ụlọ ọrụ ahụ ga-echekwa ruo mgbe ebighị ebi.
N'otu oge ahụ, mgbe ọ rịgoro ugwu ahụ, Onye isi ala Jiang kwukwara okwu. O kwuru, sị: N’agbanyeghị na ike gwụrụ anyị, ọsụsọ ana-agbakwa anyị nke ukwuu, o nweghị ihe anyị ga-eri ma ọ bụ ihe anyị ga-a weụ, ma, ahụ́ gbasiri anyị ike. Anyị gosipụtara na ọ nweghị ihe agaghị ekwe omume na ịrụsi ọrụ ike.
Mgbe ihe dị ka minit 30 zuru ike n’elu ugwu ahụ, anyị banyere n’okporo ụzọ gbadata n’ugwu ahụ wee laghachi n’ụlọ ọrụ anyị n’elekere 15:00 nke ehihie.
N’ileghachi anya na usoro ọzụzụ niile, enwere ọtụtụ mmetụta. N’ụzọ, otu nwanyị nọ n’ime obodo a kwuru ihe ị mere n’ụbọchị anwụ dị ọkụ, gịnị ka ị ga - eme ma ọ bụrụ na ike gwụ gị ma daa ọrịa; ma ndị ọrụ anyị niile na-amụmụ ọnụ ọchị ma gaa n'ihu. Ee, n’ihi na o nweghị ihe jikọrọ ya na ike ọgwụgwụ. Ihe anyi choro bu nnabata na akaebe nke anyi.
Site na ụlọ ọrụ ahụ gaa Zhushan; site na mma akpụkpọ ka tanned; site na obi abụọ ịmara onwe gị; nke a bụ ọzụzụ anyị, nke a bụ owuwe ihe ubi anyị, ọ na-egosipụtakwa ọdịbendị ụlọ ọrụ nke DTS, na-arụ ọrụ, Mmụta, na-aga n’ihu, na -emepụta, owuwe ihe ubi, na-enwe ọ ,ụ, ịkekọrịta
Enwere naanị ndị ọrụ mara mma na ụlọ ọrụ mara mma. Anyị kwenyere na ya na ụdị ndị otu a na-arụsi ọrụ ike ma na-anọgidesi ike na ndị ọrụ, DTS agaghị enwe mmeri na mmeri na asọmpi ahịa n'ọdịnihu!